Meclofenoxate (Centrophenoxine) (51-68-3) Soosaarayaasha - Phcoker
Meclofenoxate (Centrophenoxine), oo lagu iibiyo magaca sumadda ee Lucidril, waa mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay uguna daraasadda badnaa ...
Meclofenoxate (Centrophenoxine) (51-68-3) fiidiyaha
Budada Meclofenoxate (Centrophenoxine) budada Smamnuucista
Magaca Kiimikada Klophenoxate;
Fasalka Daroogada Wakiilada Anti-Allergic, Wakiilada Antineoplastic, Age antiparasitic
Molecular Wsideed 257.71 g / mol
dhibic kulayl 345.941 ° C at 760 mmHg
Biological Life-Life saacadood 2-4
SOlubility Xalka Biyaha: 2.9 mg / mL
Application Budada Centrophenoxine waxay isticmaashay dawada nootropics iyo kaabista cuntada.
Meclofenoxate (Centrophenoxine) dulmar guud
Meclofenoxate (Centrophenoxine), oo lagu iibiyay magaca sumadda Lucidril, waa mid ka mid ah dawooyinka nootropics-ka ugu horreeyay iyo kuwa loo yaqaan "smart" daroogada. Waa sumcad caan ah oo la ixtiraamo oo iskeed isku cadeysay in ka badan shan iyo toban sano isticmaalka iyo tijaabada adag ee caafimaad.
Markii ugu horreysay waxaa la sameeyay 1959 by saynisyahano Xarunta Xarunta Cilmi-baarista Sayniska Qaranka ee Faransiiska sidii loogu daaweyn lahaa cudurka Alzheimer, qulqulka dhiigga oo aan ku filneyn maskaxda, ‍ iyo hoos u dhaca garaadka ee la xiriira da'da, dawadan ayaa si weyn loogu isticmaalay daaweynta cudurrada maskaxda ee la xiriira da'da, sida sida cudurka Alzheimers iyo waallida. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa dadka caafimaadka qaba si kor loogu qaado xusuusta iyo shaqada garashada iyo kor loogu qaado guud ahaan caafimaadka maskaxda.
Cilmi baaris ayaa muujisay budada centrophenoxine inay tahay xoojin kara xusuusta iyo wakiilka ka hortagga gabowga.
Yurub gudaheeda, waxaa loo qoondeeyey daaweynta daweynta xusuusta da 'la xiriirta da'da, laakiin waxaa laga heli karaa miiska miiska cuntada si loogu daro kaabayaasha cuntada ee Maraykanka iyo Kanada, halkaasoo inta badan loogu adeegsado kobcinta garashada guryaha.
Waa maxay Meclofenoxate (Centrophenoxine)?
Centrophenoxine waxaa loo istcimaalay kaabis cunto ahaan awoodooda xasuusta-kobcinta.
Centrophenoxine waa isku darka laba kiimiko:
Dimethyl-aminoethanol (DMAE), oo ah shey dabiici ah oo laga helo cunnooyinka qaarkood (kalluunka, cuntada badda) iyo qaddar yar oo maskaxda ku jira. Waa isha loo yaqaan 'choline' waxayna leedahay saameyn maskaxeed.
Parachlorphenoxyacetic acid (pCPA), nooc isuduwaha ah ee hormoonnada koritaanka dhirta ee loo yaqaan “auxins”.
DMAE waa qeybta ugu firfircoon dawadan. DMAE si fiican ugama gudubto xannibaadda maskaxda-maskaxda. Si kastaba ha noqotee, gudaha centrophenoxine gudaheeda, waxay dhex mari kartaa caqabad-maskaxda maskaxda waxayna si fiican u gasho maskaxda
Mar haddii uu jirka ka nuugo, qayb ka mid ah centrophenoxine waxay ku dhacdaa DMAE iyo pCPA ee beerka. DMAE ayaa markaa loo beddelaa choline, halka inta hartay ee loo yaqaan 'centrophenoxine' ay wareejiso jirka oo dhan.
Faa'iidooyinka Meclofenoxate (Centrophenoxine)
Centrophenoxine ayaa laga yaabaa inay ka hortagto kansarka.
Centrophenoxine ayaa laga yaabaa inay caawiso astaamaha cudurka dyskinesia daahida.
Centrophenoxine waxay kobcisaa xusuusta iyo barashada, waxay horumarin kartaa xusuusta bukaannada waallida.
Centrophenoxine ayaa la muujiyay si kor loogu qaado sameynta, keydinta, iyo soo celinta xusuusta. Aasaaska xusuusta ayaa la hagaajiyaa markii aan leenahay heerar sare ee acetylcholine. Marka la eego xaqiiqada ah in Centrophenoxine ay kor u qaaddo hawlo kala duwan oo cholinergic ah, mid ka mid ah walxaha la soo saaray waa choline, iyo fosfoolal kale oo kaladuwan
Hawlaha Fahamka ee La Korsaday
Centrophenoxine waxaa loo isticmaali karaa 'DMAE prodrug' tanna waa mid aad muhiim u ah, maadaama molikalkani yahay mid wax ku ool ah yareynta unugyada kale ee waxyeelada leh maskaxda dhexdeeda taas oo sababi karta hoos u dhac weyn ee howlaha garashada. Marka mobiladahaan laga saaro, dadka da'da ah waxay yareyn karaan gabowgooda oo ay beddeli karaan qaar ka mid ah waxyeelooyinka da'da.
Centrophenoxine waxay leedahay astaamaha anti-gabowga iyo astaamaha neerfaha
Centrophenoxine waxaa la muujiyay inuu sare u qaadayo nolosha jiirka ilaa 50%.
Centrophenoxine waxay wanaajisaa niyadda iyo dhiirigelinta, waxay kaa caawin kartaa yareynta walaaca.
Daraasadaha xayawaanka waxay soo jeedinayaan in centrophenoxine ay leedahay saameyn la iska cabbiro karo ee walaaca fekerka
Meclofenoxate (Centrophenoxine) shiid
Centrophenoxine badiyaa waxay ku shaqaysaa gudbinta iyo xoojinta waxqabadka choline. Choline waa horudhaca acetylcholine, waana lama huraan iyo xaddidan neurotransmitter kaas oo si xoog leh xiriir ula leh garashada garashada, caaga, iyo xusuusta. Ma cadda sida saxda ah ee loo yaqaan 'centrophenoxine' ay u kordhiso heerarka choline iyo acetylcholine, laakiin waxaa loo maleynayaa in si dabiici ah ay ugu jabto choline ama ay u beddeleyso fosfooraska dhexdhexaadka ah ka dibna loo isticmaalo soo saarista acetylcholine. Iyada oo aan loo eegin dariiqa, waa awoodda cholinergic ee ka dhigaysa centrophenoxine noocan oo kale ah awood xoog leh nootropic nolosheeda.
Marka lagu daro kicinta wax soo saarka acetylcholine, centrophenoxine waxaa sidoo kale loo yaqaanaa inay tahay quwad dareeme oo neerfaya guud ahaan waxqabadka maskaxda iyadoo la hagaajinayo nuugista gulukooska iyo kordhinta qaadashada oksijiinta. Marka sidaas la sameeyo, centrophenoxine waxay maskaxda ka dhigeysaa mid si hufan u shaqeysa, sidaas darteedna waxay wanaajineysaa diiradda, uruurinta, iyo caddeynta fikradaha, iyadoo laga takhaluso waxa loogu yeero wajiga maskaxda. Sida antioxidant-ka awoodda leh, waxay hoos u dhigtaa xag-jiryada xorta ah, waxay daadisaa sunta waxayna ka qaybqaataa hagaajinta unugyada waxyeelo soo gaartay. Ugu dambeyntiina, waxay dib ula noqotaa gabowga garaadka iyadoo la yareynayo ama xitaa baabi'ineysa soo-saarista alaabada qashinka dheef-shiid kiimikaadka ee loo arko inay yihiin "xirmo iyo jeex jeexitaan."
Cilladaha dawada ee Meclofenoxate (Centrophenoxine) iyo nabdoonaanta.
Centrophenoxine guud ahaan waxaa loo arkaa inay nabad tahay oo aan sun ahayn. Waxaa la isticmaali jiray muddo 50 sano ah iyada oo aan waxyeellooyin waaweyn oo muhiim ah la sheegin.
Waxaa loo sheegaa inay tahay daawo loo dul qaadan karo dadka waaweyn ee caafimaadka qaba iyo dadka da'da ah ee la il daran xusuusta.
Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa la kulmay waxyeelooyin khafiif ah oo yar, oo ay ku jiraan lallabbo, madax xanuun, arrimaha caloosha, iyo hurdo la'aan.
Centrophenoxine laguma talinayo haweenka uurka leh sabab u ah maadada 'DMAE'.
Meclofenoxate (Centrophenoxine) qiyaasta budada
Centrophenoxine waxaa laga heli karaa miiska farqiga ee kaabsoosha ka kooban 200-300 mg midkiiba. Tijaabooyinka caafimaad ee lagu tijaabiyay saameynta ay ku yeelan karto centrophenoxine ee howlaha garashada ayaa adeegsaday qiyaaso maalinle ah
1,200 mg waayeelka caafimaad qaba iyo qiyaaso ilaa 2,000 mg bukaannada jahawareerka ah.
Centrophenoxine waa il choline wanaagsan, waxaad ka heli kartaa xirmo badan oo nootropic ah - kuwa ugu caansan waa Noopept iyo Racetams.
Centrophenoxine iyo Aniracetam Stack
Halkan waxaa ku yaal tusaale kaydka 'centrophenoxine' oo ay kujirto caanka caanka ah racfaam aniracetam si kor loogu qaado xusuusta, niyadda, hal-abuurka, iyadoo la yareynayo walaaca.
1-2x maalin kasta
Centrophenoxine iyo Noopept Stack
Halkan waxaa ah tusaale ahaan xirmo centrophenoxine ah oo leh Noopept, xirmadaani waxay horumarin kartaa xusuusta iyo barashada, iyadoo la siinayo astaamaha neerfaha.
On the door of the intracellular physicochemistry ee muujinta hiddo-wadayaasha tiro ahaan inta lagu jiro gabowga iyo saamaynta centrophenoxine. Dib u eegis Zs-Nagy I et al. Arch Gerontol Geriatr. (1989)
Daawada loo yaqaan 'Cholinergic' ee loogu talagalay daawada dhimirka ee 'dyskinesia'. Tammenmaa-Aho I, Asher R, Soares-Weiser K, Bergman H. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Mar 19
Waxqabadka Cytotoxic ee wakiilada alkylating ee joogitaanka centrophenoxine iyo alaabada hydrolysis. Sladek NE. J Pharmacol Exp Ther. 1977 Dis
Qaadashada waxqabadka antitumor ee cyclophosphamide by centrophenoxine. Kanzawa F, Hoshi A, Tsuda S, Kuretani K. Gan. 1972 Og
Centrophenoxine: saameynta maskaxda da 'weynta maskaxda. Nandy K et al. J Am Geriatr Soc. (1978)
Saamaynta kaladuwan ee meclofenoxate ee xusuusta luminta waayeelka. Marcer D et al. Da 'Da'. (1977)
Nootropics budada centrophenoxine (meclofenoxate) faa'iidooyinka iyo xirmooyinka